‘सिठ्ठी बजाउँछन्’ मलाई जिस्काउछन, छिमेकी केटाहरुले ! (भिडियो हेर्नुहोस)
लक्ष्मी पुरी प्रधानको स्वरमा ‘सिठ्ठी बजाउँछन्’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा राम गोपाल आशुतोषको शब्द र देवेन्द्र नेवाको संगीत तथा संगीत संयोजन रहेको छ ।
शंकर बिसीलको निर्देशन रहेको भिडीयोमा शंकर बिसी र करिश्मा ढकाललाई फिर्चड गरिएको छ । दुर्गा पौडेलको छायाँकन रहेको गीतको भिडीयोमा नवीन घर्ती मगरको सम्पादन रहेको छ । भिडियो हेर्नुहोस ।
* बिप्लव बन्द : आज कहाँ के के भयो ?
नेपाल बन्द आह्वान गरेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले सोमबार विभिन्न जिल्लामा आगजनी तथा बम आतंक सिर्जना गरेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार बारा, मकवानपुर र सुर्खेतमा गाडीमा आगो लगाइएको छ भने देशका दर्जनभन्दा बढी स्थानमा बम तथा विस्फोटक पदार्थ फेला परेका छन्।
* बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले कालिकोटमा दुईवटा मोटरसाइकल जलाए
कर्णाली राजमार्गको कालिकोट खण्ड कालेखोलामा कालिकोटबाट सुर्खेततिर जाँदै गरेका २ वटा मोटरसाइकल विप्लव समूहका कार्यकर्ताले जलाइ दिएका हुन्।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट युवा संगठन नेपालका कर्णाली व्यूरो इन्चार्ज सितल बिष्टले पार्टीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको अवज्ञा गर्दै कालिकोटबाट सुर्खेततिर जाँदै गरेका भे ८ प ३५८ र भे ७ प ४८५७ नम्बरका २ वटा मोटरसाइकल सडकमै जलाइएको जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्ट ।
* काभ्रेको धनेश्वर र तिनपिप्लेमा बम विस्फोट
सोमबार बिहान काभ्रेको दुई स्थानमा बम विस्फोट भएको छ ।
बनेपा नगरपालिकाको धनेश्वर जाने पुल नजिकै फोहोर भएको ठाउँ र पाँचखाल नगरपालिका– ६ तिनपिप्लेमा बम विस्फोट भएको हो ।
धनेश्वरमा फोहोरको थुप्रोमा बम विस्फोट भएकाले कुनै क्षति पुगेको छैन भने तिनपिप्लेमा भएको विस्फोटमा अरनिको राजमार्ग सडकमा थोरै क्षति पुगेको छ । बम विस्फोटबारे प्रहरीले भने केही जानकारी दिएको छैन । विप्लव नेकपा कार्यकर्ताले आइतबार साँझ बनेपामा मसाल जुलुस समेत निकालेको थियो । उज्यालो अनलाईन ।
* सर्लाहीमा नगरपालिकाकाे कार्यालयमा बम विस्फोट
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका कार्यालयमा आल्मुनियम बम विस्फोट गराएका छन् । आइतबार राति ११ बजे कार्यालयको बाहिरी पर्खालमा बम विस्फोट गराइएको हो ।
विस्फोटका कारण चार मिटर पर्खाल भत्किनुका साथै कार्यालयको तीनवटा झ्यालको सिसा फुटेको नगर प्रमुख जमरुद्दिन मन्सुरले जानकारी दिनुभयो । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले सोमबारको बन्दलाई लक्षित गर्दै बम विस्फोट गराएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । उज्यालो अनलाईन ।
* खुमलटारमा २ डेटोनेटर, सेनाद्वारा निष्क्रिय
खुमलटारको टुटेपानीमा रहेको नेपाल लेप्रोसी ट्रस्ट भवनको पेटीमा राखिएको बम नेपाली सेनाले निस्क्रिय पारेको छ । सिनामंगलबाट गएका क्याप्टेन अजित थापाको टोलीले बम डिस्पोज गरेको हो । सेनाले रोबोटको सहायताले बम निस्क्रिय बनाएको छ । लेप्रोसी ट्रस्टको पेटीमा झोलाभित्र पाँच लिटरको प्रेसर कुकुर भेटिएको हो । कुकरमा दुई वटा डेटोनेटर र ६ वटा क्यामरामा लगाउने जस्तो देखिने ब्याट्री भेटिएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट
* भैंसेपाटीमा ६ वटा डेटोनेटर र बिस्फोटक पाउडरसहितको बम फेला
त्यसैगरी भैसेपाटीको आभास क्षेत्रनजिकै उकालो बाटोमा ६ वटा डेटोनेटर र बिस्फोटक पाउडरसहितको बम फेला परेको सेनाले जानकारी दिएको छ उतm बम लगनखेलस्थित राजदल गणले निस्क्रिय बनाएको हो । सोमबार बिहान ललितपुरका दुई ठाउँ राखिएका बम निकै शतिmशाली रहेकोे डिस्पोजमा खटिएका सेनाले जनाएका छन् । एउटा डेटोनेटरले एउटा घरलाई क्षति गर्न सक्ने सेनाको भनाई छ ।
बिहानै भैसेपाटीमा बम डिस्पोज गरी खुमलटार आइपुगेको राजदल गणका टोलीले क्षति कम गर्नका लागि सिनामंगलबाट रोबोट झिकाएको थियो । खुमलटारमा करीब साढे सात बजे बम राखिएको जानकारी आएको थियो निस्क्रिय पार्दा झण्डै १० बज्यो । महानगरीय प्रहरी परिषर जाउलाखेलका प्रवक्ता नारायण चिमोरियाले भेटिएका बमहरु त्रास फै्रलाउने खालका भएको जनाएका छन् उनले भने, ‘ती बम कस्ता प्रकृतिका हुन परीक्षणपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट
* बर्दिवास नगरपालिका कार्यालयनजिक सोमबार बिहान कुकर बम फेला
पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउस्थित नगर कार्यालयको मूल गेटनजिक फेला परेको प्रेस्टो कुकरको कार्टुनभित्र फेला परेको वस्तु कुकर बम भेटिएकाे छ । प्लाष्टिकको डोरीले बाँधिएको कार्टुनभित्र २ लिटर क्षमताको कुकुर रहेको र बाहिरबाटै विद्युत तार पनि देखिएको छ।
उक्तवस्तु भएको जानकारीलगत्तै घटनास्थललाई सुरक्षा घेरामा लिइएको छ। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोलीले ५० मिटर वरपर आवागमन रोकेको छ। आसपासका पसल बन्द राखिएको वर्दिवासस्थित इलाका प्रहरीका डिएसपी निसान थापाले जनाए। कान्तिपुर ।
* काठमाडौंको नयाँ बसपार्कस्थित लोत्से भवनको दोस्रो तलामा प्रेसर कुकर बम फेला
काठमाडौंको नयाँ बसपार्कस्थित लोत्से भवनको दोस्रो तलामा प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ ।बम देखिएको सूचना प्राप्त भएकसँगै प्रहरीले उक्त स्थानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर थप अनुशन्धान गर्दैछ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका एसएसपी श्याम ज्ञवालीका अनुसार उक्त स्थानमा जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेज हेर्दा बम हिजा साँझ नै राखिएको देखिएको छ। कान्तिपुर ।
* नवलपुरमा एक ट्रक र एक जिपमा पेट्रोल बम प्रहार
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरमा एक ट्रक र एक जिपमा पेट्रोल बम प्रहार भएको छ । पेट्रोल बम प्रहारबाट ट्रक चालक घाइतेसमेत भएका छन् । सोमबार बिहान २ बजेतिर मध्यबिन्दु नगरपालिका–११ दाउन्नेमा लु २ ख १०८ नम्बरको सिमेन्ट लोड गरेको ट्रकमा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले पेट्रोल बम हानेको डन्डा प्रहरीले जनाएको छ ।
पेट्रोल बम प्रहारबाट ट्रक अनियन्त्रित भइ सडकबाट अन्दाजी ५ मिटर तल खसेर आगो लागेको थियो । घटनामा ट्रक चालक तनहुँको ब्यास नगरपालिका ४ बस्ने ३३ वर्षीय अमर विक घाइते भएका छन् । उनको ढाड र अनुहार जलेको छ । उनको स्थानीय मनकामना पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ । सहचालकको अवस्था भने सामान्य छ । कान्तिपुर ।
* मकवानपुरमा दुई गाडी जलाइयो
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा सोमबार बिहानै गाडी जलाइएको छ। बन्दका दिन बिहानै ४ बजे थाहा नगरपालिका(१ कुन्छाल नजिकै ना ६ ख ८००७ नम्बरको आइचर गाडी जलाइएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ।
यस्तै मकवानपुरकै हेटौंडामा मिनी ट्रक जलाइएको छ। त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौंडाको चौकीटोलस्थित प्रहरी चौकीनजिकै ना ७ ख ९४९३ नम्बरको मिनी ट्रकमा आगजनी भएको हो। मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आगोले गाडी पूरै जलेको छ। अनलाइन खबर ।
* सुर्खेतमा यात्रु ओरोलेर बसमा आगो
यस्तै विप्लवका कार्यकर्ताले पूर्वी सुर्खेतमा बसमा आगजनी गरेका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ को गुमीबाट छिन्चु आउँदै गरेको ना२ख ७४४४ नम्बरको बस गोचेखोलामा आइपुगेपछि सोमबार बिहान आगो लगाइएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार हतियारसहित आएका विप्लवका कार्यकर्ताले चालक, सहचालक र बसधनीलाई झारेर पेट्रोल छर्केबसमा आगो लगाएका हुन्। आगजनीबाट बस पूर्णरुपमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। बस जेलेको ठाउँ नजिकै शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ। अनलाईन खबर ।
* बारामा ट्रक जलाइयो
बारामा भारतीय ट्रक जलाइएको छ। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका(३, बजनीमा रोकिराखेको भारतीय लरीमा अज्ञात समूहले आगो लगाएको हो। एपी ३१ एक्स ६३१६ नम्बरको ट्रक लरी नेपाल(भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पाइप बोकोर आएको थियो। आगजनीमा संलग्नको खोजी र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ।
* हेटौंडाको बुद्धचोकमा कुकर बम
सोमबार बिहान हेटौंडाको बुद्धचोकनजिक प्रेसर कुकर बम भेटिएको छ। बम राखेको खबर पाएपछि प्रहरीले नेपाली सेनाको टोलीलाई बोलाएर बम निस्क्रिय बनाएको छ। नेपाल खबर ।
* तनहुँका दुई ठाउँमा शंकास्पद वस्तु
तनहुँका दुई स्थानमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छन्। सदरमुकाम दमौलीमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निस्क्रिय पारेको छ। नेपाल खबर ।
* मोरङको सुन्दरहरैँचामा बम
यस्तै मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका(७ ठहियाचोक नजिकै प्रेसर कुकर बम फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। नेपाल खबर ।
* राैतहटमा शंकास्पद वस्तु
पूर्व(पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर चोकमा शंकास्पद् वस्तु फेला परेको छ। उक्त बस्तु बम भएको प्रहरीको अनुमान छ। सूचनापछि नेपाली सेनाको डिस्पोजल त्यहाँ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल खबर ।
* भक्तपुरमा शंकास्पद बस्तु
नेपाल बन्दको दिन बिहानै भक्तपुरको च्यामासिंहमा शंकास्पद बस्तु फेला परेको छ । च्यामासिंहस्थित मालपोत कार्यालय नजिकै सोमबार बिहान पौने ३ बजेतिर प्रहरीको मोबाइल टोलीले शंकास्पद बस्तु फेला पारेको हो । सेतो रंगको झोलामा पोको पारिएको अवस्थामा रहेको शंकास्पद बस्तु निष्क्रिय पारिएको छ । विप्लवको बन्द असफल पार्न सुरक्षाकर्मीले जनशक्ति थपरे ुहाइ अलर्टुमा रहेको उपत्यकाका सुरक्षा निकाय प्रमुखले बताएका छन्। नेपाल खबर ।
* धादिङमा बम निष्क्रिय
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको महादेवबेंसी पुल बम फेला परेको छ । सोमवार बिहानै फेला परेको विष्फोटक पदार्थलाई नेपाली सेनाको टोलीले चार घण्टापछि निष्क्रिय बनाएको छ। आइतबार राति साढे १ बजेतिर फेला परेको शंकास्पद नेपाली सेनाको टोलीले सोमबार बिहान साढे ५ बजेतिर निष्क्रिय पारेको हो । विष्फोटक पदार्थ गजुरीबाट नेपाली सेनाको टोली निष्क्रिय बनाएको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका अनुसार विष्फोटक पदार्थ सकेट बम रहेको खुलेको छ । अर्कातिर धादिङकै नौबिसेमा पनि शंकास्पद बस्तु भेटिएको छ । नेपाल खबर ।